Azalid (Azithromycin) – Online Myanmar Pharmacy
Title Capsule Tablet
Pack Size2x31 x 3
Capsule / 250mg /2x3Tablet / 500mg / 1 x 3
Azalid (Azithromycin) - is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
အဇာလစ် ဆေးသည်ပိုးသတ်ဆေးအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ တိုက်ဖိုက်ရောဂါများ လည်ချောင်း ယောင်ခြင်း ၊ အာသီးယောင်ခြင်း ၊ နှာခေါင်းတွင်းအမြှေးပါးယောင်ယမ်းခြင်း ၊ စသော အထက်ပိုင်းအသက်ရှုလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ရောဂါများ လေပြွန်ရောင်ယမ်းခြင်း ၊ အဆုတ်လေအိတ်ငယ်များယောင်ယမ်းသောနမိုးနီးယားရောဂါ များ နှင့် အရေပြားနှင် ့အရေပြားအဖွဲ ့အစည်းများတွင်ပိုးဝင်ခြင်းများဖြစ်သော ဝက်ခြံ၊သွေးစုနာများ အနာအမျိုးမျိုးနှင် ့လိင်အဂါပိုးဝင်ရောဂါများ သွားနှင့်သွားဖုံးဆိုင်ရာပိုးဝင်ခြင်းများတွင်ကုသရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Azalid (Azithromycin) is indicated for the treatment of infections caused by susceptible bacteria.
1. Mild to moderate typhoid fever
2. Upper respiratory tract infections including pharyngitis, tonsillitis, sinusitis and otitis media; lower respiratory tract infections including bronchitis and pneumonia
3. Skin and soft tissue infections including acne, cellulitis, pyoderma, wound infections etc.
4. Genital infections including chancroid, gonococcal and nongonococcal urethritis, cervicitis caused by Chlamydia trachomatis and uncomplicated gonococcal infections of the cervix, urethra and rectum caused by Neisseria gonorrhoeae
5. Odontogenic infections including dental caries, pulpitis, periapical abscess osteoperiostitis of the jaw, maxillary cysts and periodontal and deep facial space infections